Ny tombony amin'ny alàlan'ny fakantsary fampitandremana polisy Vahaolana OMG
Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Fampitandremana ho an'ny polisy
Body Warn Camera dia fantatra koa amin'ny hoe BWV (Body Worn Video) dia miasa ho toy ny horonantsary, audio, na rakitsary fakana sary azo natao ho an'ny polisy. Ny fakan-tsary toy izany dia manana fampiasana voafaritra sy famolavolana voafetra, izay ampiasaina tsy an-kanavaka fa fampiasa amin'ny polisy. Afa-tsy ny fampiasana polisy, ireo fakantsary ireo ihany koa dia ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany toy ny varotra, ny fahasalamana, ny fitsaboana, amin'ny fampiasana miaramila, ny olon-tsotra dia afaka mampiasa fakan-tsary efa lany, ary koa ny asa fanaovan-gazety. Ny tatitra iray an'ny Nascent dia mampiseho porofo mifangaro momba ny fiantraikan'ny fakan-tsary niasa amin'ny fampiasana hery ataon'ny vondrom-piarahamonina ary ny fahatokisan'ny mpanao lalàna ny polisy.
Ny BWC dia namboarina manokana mba hampiasaina amin'ny iray amin'ireo vatana telo, toy ny famafazana, ny fiarovan-doha, na amin'ny fitaratra. Ny fakantsary sasany dia misy fampisehoana mivantana, fa ny hafa kosa mifantoka amin'ny fitahirizana eo an-toerana mitovy amin'ny Digital Voice Recorder. Fikambanana maro, ao anatin'izany ny Evaluation Center sy ny National Criminal Justice Technology Research (NJTR) dia nanao fanadihadiana maromaro tamin'ny fakan-tsary amin'ny vatan'olombelona mba hanampiana ireo fikambanana amin'ny fividianana ny tsara indrindra amin'izy ireo. Na izany aza, ny fandalinana dia mamaritra ny optika, fitaovana, GPS, audio ary sokajy hafa.
Ireo fakantsary ireo dia ampiasaina amin'ny sehatra samy hafa, ary ny anarany dia ireto manaraka ireto:
Body Worn cameras dia namboarina manokana ho an'ny polisy sy ny fampiharana ny lalàna hafa mba hitazonana ny fandriampahalemana manerana ny tanàna na manerana an'izao tontolo izao. Natao hanatsarana ny fifandraisan'ny sivily sy ny polisy ihany anefa ireo fakantsary ireo. Noho izany, ireo andiany voalohany tamin'ny fakan-tsary vaovao nitazona polisy dia navotsotra manodidina ny 2005 any UK. Na izany aza, narahina avy amin'ny 2014 ho avy hatrany, amin'ny fampiharana goavana amin'ny US mba hampitomboana ny fandraisana andraikitra sy ny fangaraharana ataon'ny polisy. Taorian'izany dia firenena maro no nanaraka ny dian-tongotry ny tany ary niroso tamin'ny firosoana tsy ho ela. Ny fandinihana tany am-boalohany dia manasongadina ny fiantraikany tsara, fa ny fiverenana dia mifangaro fandinihana mifangaro. Ny valiny dia naseho tatitra samihafa arakaraka ny teny eo an-toerana sy ny torolàlana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana. Ny fanamby maro dia misy:
Samy fakan-tsary sy fiarovan-doha fiarovan-tànana no ampiasaina ao amin'ny fandaminana miaramila. Na izany aza, ny horonan-tsary dia azo tehirizina ao an-toerana na alefa mivantana any amin'ny foibe commandant na outpost an'ny miaramila.
Ireto misy tombony azo amin'ny fakantsary Polisy Body-Worn tianao ho vakiana
Raha ny filazan'ny mpitandro filaminana mampiasa ireto fakantsary ireto dia mamorona kaontiny sy fangaraharana izy ireo mba hampihenana ny herisetra ataon'ireo polisy. Ankoatr'izay, nanamarika izy ireo fa ny fakan-tsary amin'ny vatana dia manome porofo ilaina ilazana hanaporofoana na hanaratsiana ny fiampangana diso ary fitaovana tsara ho an'ny fampiofanana polisy izy ireo ary manome fiarovana sy fanohanana ny vahoaka ihany koa. Ny fanoherana ny herin'ny polisy dia ampiasain'ireo fakan-tsary amin'ny vatana fa ny fakantsary efa niharatsy dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fahasalaman'ny mpampiasa ara-batana sy ara-tsaina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana azy ireo amin'ny fitaovana toy izany ary ny adin-tsaina amin'ny firaketana horonantsary tsy tapaka. Andao ary hojerentsika ny tombontsoa azo avy amin'ny fakan-tsary an'ny polisy.
Ny tsy azo ihodivirana, ny olona manerana an'izao tontolo izao dia samy manana ny fihetsika rehefa mahalala izy ireo hoe horonantsary. Noho izany, ny cameras an'ny polisy dia afaka mandrisika ny fitondran-tena etika ataon'ny polisy manoloana ny besinimaro ary ampiharina eo imasom-bahoaka koa io fitsipika io, ka mitarika ny fihenan'ny tahan'ny heloka bevava, manao ny fampiasan-kery an-keriny ary handroaka ireo olona manafika tompon'andraikitra. Araka ny fanadihadiana natao tany Rialto, mihena ny isan'ireo heloka bevava amin'ny 50% noho ireo fakantsary raisin'ireo polisy mandritra ny fakantsary voalohany amin'ny pakan'ny polisy. Mahagaga fa ny fitarainan'ireo manamboninahitra dia latsaka tamin'ny 28 ka 3 nandritra ny fotoam-pitsarana.
Fiarovana ny mpitandro filaminana amin'ny fiampangana lainga sy ny faharatsiana
Araky ny voalazako tetsy ambony, ny Camera Body Won Camera (amin'ny teny fohy PBWC) dia samy manome porofo an-peo sy horonan-tsary izay azo hamarinina izay diso tamin'ny fotoana voatondro. Ny teknolojia toy izany dia mahasoa ho an'ny roa tonta toa ny Manamboninahitra polisy sy ny Public. Afaka manara-maso ny fampiasana ity teknolojia izay tsy mifehy olon-tsotra ity ireo mpitandro ny filaminana, na dia misy olona avy amin'ny besinimaro aza dia voasambotra izay manandrana manao fiampangana lainga amin'ny polisy rehetra. Izahay dia manisa azy io ho iray amin'ireo tombony tsara indrindra satria azo antoka amin'ny roa tonta. Manamboninahitra polisy any amin'ireny firenena ireny izay misy an'ity teknolojia ity dia manasazy ireo mpitandro ny filaminana na koa ny vahoaka noho ny fitondran-tena ratsy.
Fitaovana tsara hianarana ary manana fanohanana feno avy amin'ny Public
Aorian'ny tombony roa dia misy fahatelo izay ahafahana ampiasana ireo horonantsary voarakitra amin'ny fakantsary Polisy Body-Worn mba hanazarana ireo manamboninahitra polisy vaovao misy sy vaovao. Noho izany, dia efa nampiasa ity teknolojia ity ny Sampan-draharahan'ny Polisy ao Miami ary nanambara ampahan'ny fitaovan'ny polisy nanomboka tamin'ny 2012. Noho ny fananana fakantsary fotsiny dia milamin-tsaina kokoa ny olona ary miova tanteraka amin'ny fihetsiky ny besinimaro ny fihetsiky ny polisy. Ankehitriny dia miresaka fahalalam-pomba izy ireo ary tsara. Amin'izao fotoana izao, misy Kamera maro karazana misy azo alaina, ao anatin'izany:
Mini fakan-tsary Mini WIFI GPS / 3G / 4G
Fakan-tsary Rakotra Vatana
Ny fakantsary volon-koditra vita tamin'ny SD
Fakan-tsary madiodio Mini azo alaina miaraka amin'ny Encryption + LCD
Ireo rehetra ireo fakan-tsary tsara tarehy ampiasaina ho an'ny fiarovana mahavariana, ary raha mitady fakan-tsary toy izany ianao dia afaka mitsidika omg-solutions.com. Afaka mahazo vokatra amin'izy ireo ianao amin'ny vidiny mirary. Na dia ampiasain'ny fikambanana aza dia avela hanana izany ho an'ny filaminany ihany koa ny olom-pirenena. Araka ny nolazaiko etsy ambony, tsy misy tatitra ratsy arak'ireto fakantsary vatana ireto, fa misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao ara-batana na mety ho aretin-tsaina. Amin'izao tontolo izao, samy manana tombony sy fatiantoka avokoa ny zava-drehetra, ary raha manaraka ny fitsipika isika dia nohamafisina fa misy tombony ihany koa ny Polisy Worn Body cameras. Ka ity misy lisitra haingana momba ny tsy fatiantoka (cons) ho hitanao.
Ireo cameras ireo dia tsy azo itokisana ary lafo be
Manafika ny fiainana manokan'ny besinimaro, manambara ireo niharam-boina, manimba ny fifandraisana amin'ny vahoaka sy ny polisy
Mampiasa ireo fakantsary, ny filaminan'ny polisy dia atahorana foana.
Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Fampitandremana ho an'ny polisy no farany niova: Septambra 26th, 2019 by Admin